diep.io 1.2.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.10 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ diep.io
diep.io ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Agar.io ၏ဖန်ဆင်းရှင် မှစ. , နောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းခခြှေဲ hit ဂိမ်းမိုဘိုင်းမှကြွလာ! , သင့်တင့်ကားကိုအဆင့်မြှင့်အခြားကစားသမားပစ်ချနှင့်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရောက်ရှိ!
ရိုက်ကူးဖျက်ဆီးလုပ်ကွက်များနှင့်အခြားကစားသမား XP ကို​​ဝင်ငွေ, သင့်တင့်ကားကိုတက်မြင့်နှင့်အသစ်အတန်း, လက်နက်နှင့်အရည်အချင်းများသော့ဖွင့်! သငျသညျ, လျင်မြန်စွာ-မီးစက်သေနတ်ကိုရှေးခယျြပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများတစ်အမွေးကြမ်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့, ရှိသမျှလမ်းညွန်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်ရိုက်ကူးကြလိမ့်မည်နည်း
ဧရာ multiplayer အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်!
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးကြီးမား server များပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကမှာအခြားကစားသမားများများစွာနှင့်အတူ Play!
XP ကို​​ရဖို့ရန်လုပ်ကွက်များနှင့်အခြားကစားသမားကိုဖွိုဖကျြ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပစ်ချရဘူး! ထွက်ရှိဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့!
အဆင့် UP နှင့်သင့် Stats မြှင့်တင်ရန်!
သင့်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကစားလမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲရန်မှ stats သော Choose! သငျသညျအပိုက​​ျည်ဆံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုမြန်နှုန်းချင်ပါသလား? ဒါဟာအားလုံးသင်ဆင်းပဲ!
ထူးခြား tank class ကနေရွေးချယ်!
သစ်တစ်ခုအတနျးရန်သင့်တင့်ကားကိုအဆင့်မြှင့်။ စက်သေနတ်, ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများ, တိုင်းဦးတည်အမြောက်များ ... ရှေးခယျြမှု၏လောကဓာတ်ရှိတယ်!
မိုဘိုင်းအပေါ် diep.io touchscreen များအတွက်စုံလင်သောအသစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တကွ, hit ကို web ဂိမ်းကဲ့သို့တူညီသောအကြီးအတှေ့အကွုံမြားကမ်းလှမ်း!
- အွန်လိုင်း multiplayer action ကို!
- အကြံပေးအဖွဲ့စစ်ဆင်ရေးအပေါ် Fast-paced အကြံပေးအဖွဲ့!
- အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြံပေးအဖွဲ့အတန်းသို့ Upgrade!
http://facebook.com/officialdiepio: Facebook ပေါ်မှာ diep.io လိုပဲ
diep.io အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
diep.io အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
diep.io အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
diep.io အား အခ်က္ျပပါ
lengrigali စတိုး58.07k
diep.io ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း diep.io အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.2.10
Release date: 2019-06-20 17:04:31
diep.io APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ